Indawo yeeNdwendwe eClandon Ridge - I-Airbnb
Indawo yeeNdwendwe eClandon Ridge
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDenver
Igumbi lokuhlala elinendawo yokupaka yabucala kunye nezixhobo zangoku ezibandakanya igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Olu luntu luyimfihlo lubekwe kwindawo eqhelekileyo yase-Alberga Heights, eChristiana eqhayisa ngomphakamo ongaphezulu kwe-2000 ft ngaphezu komphakamo wolwandle. I-suite yeendwendwe ilungele izibini okanye abantu abangabodwa abafuna ukudibanisa okanye ukubamba ukuphumla okufunekayo kunye nokuphumla.
Ibekwe kude nohola wendlela iSedburg, ikhaya leMveli laseJamaica eliyilwe labonelelwa ngamagcisa engingqi yethu ukongeza ixabiso kumava akho enkcubeko ewonke. Sigcina igadi ephilayo yemifuno, iziqholo, iti, iziqhamo, imifuno kunye nokubonelelwa komhlaba okuvumela ukuvezwa kwezolimo zethu. Iimbono ezichukumisayo kunye nokufikelela kuluntu oluzimele ngokumangalisayo ukuba ukhetha ukubandakanya abantu basekuhlaleni abanobuhlobo ababonisa inkcubeko yethu edlamkileyo kunye neentsomi.
UChristiana uhlala echazwa njengelali yakudala yamaNgesi. Likhaya leepatties zenkomo yaseJamaican, kunye neendawo zokutyela ezininzi zaseJamaican ezibandakanya inyama yehagu kunye nenkuku elungiswe kwiziqholo zalapha ekhaya kunye nemifuno. Uluntu luxhomekeke kwiMarike yamaFama ngemveliso ephantsi, iziqhamo kunye nemifuno. Le ngingqi yaselumelwaneni ibonelela ngethuba elimangalisayo lokuba uzintywilisele kwinkcubeko yethu etyebileyo yaseJamaican kwaye uzibandakanye neentsapho zalapha ekhaya. Ezinye iindawo zomdla ofikeleleka kuwe ngaphakathi okanye malunga neyure ziiCockpit Country Adventure Tours, iAppleton Rum Tour, Lovers Leap, YS falls kunye neCanopy Tour kunye ne "Little Ochie" kwezona ndawo zibalaseleyo zokutya kwaselwandle ukuquka "iJerk. Intlanzi kunye ne-Curried Lobster.
Umbuki zindwendwe ngu- Denver
Siyakonwabela ukuhlalisana, ukufunda ngezinye iinkcubeko kunye nokwabelana neendwendwe zethu inkcubeko yethu eguqukayo. Siya kuhlala sifikeleleka kwiindwendwe zethu kwaye sijonge phambili ekuphenduleni yonke imibuzo yakho.